ururinta cabsi yimaado oo uusan si ay lacag u amaahannay soo laaban?
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ ururinta cabsi yimaado oo uusan si ay lacag u amaahannay soo laaban?
In the movies iyo jilidda riwaayadaha dhaqaale ee ay khuseeyaan, goobta waxaa badanaa loo arkaa fulinta ururinta cabsi dhanka ah isagoo caydh ah.
ilaa hadda kuwa aan weligood lacag soo amaahday hay'adaha maaliyadeed, waxaa laga yaabaa in qayb aad u cajiib ah.
maxaa yeelay, noocan oo kale ah ururinta, ma waxaa la sameeyey ee dunida dhabta ah? Waxaan soo koobay sheekada oo faahfaahsan.
oo asal ahaan ma jiraan wax ururinta, sida riwaayadaha ka
moneylender, hanjabo ka subaxnimada hore ee albaabka igu dhuftay xoog, waxaa laga yaabaa in dad badan oo kuwaas oo ay leeyihiin image ah, sida.
Si kastaba ha ahaatee, anigu ma siin waa dhab in marka hore waa in deyn lacag ah si ay u qabtaan ururinta noocan oo kale ah waa. Haddii
maxaa yeelay, waayo daciifiyaa image ah shirkadaha wax haddii noocan oo kale ah.
wax-u ururinta cabsi waa, in aad ka fikirto in kuwa sameeya maaliyadda gudcurka sida tuug maamulka noqon lahaa caadi ah. In
, iyo deyn lacag odhan haddii qabtaan nooca ururinta, haddii caydh ah bixinta ahaa waa raagay, hay'ad maaliyadeed waxaad la xiriiri doonaa foomka, sida warqad telefoon iyo e-mail, waxaa laga shaabadeeyey. Anonymous
jirin xiriir toos ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan qaadan qofka iyo magacaabidda, sidoo kale waa caadi in sida qoyska iyo goobta shaqada iman telefoonka.
Sidaa darteed, si aanay u dhibin in dhinac saddexaad, hubaal taariikhda bixinta Isku day in aad qaadato xaqiijinta.
ururinta waxaa jira tilmaamo in go'aansaday dalka
Dhab ahaantii, aad ogtahay in shirkadda dhaqaale laftiisa mararka qaarkood ururinta, sida riwaayadaha ay u badan tahay in ay noqdaan xadgudubyada sharciga? Waxaa laga codsadaa in xirfad ee farshaxanka si ay u fuliyaan ay amaahda iyo amaahashada lacag
, item Money amaahda Law Ganacsiga, ayaa la aasaasay waa in loo gudbiyaa sida "xeerka falalka ururinta", xadgudub in tani waxay noqon doontaa waajib ah in rigoore.
tusaale ahaan, ilaa iyo inta ay jirto sabab sharci ah lahayn, waxaa jira xeerar waa in oofin ururinta ka deyntay kale oo aan ahayn 8:00 pm 9 subaxnimo ilaa.
In si kale loo dhigo, sida in ay iska indha sii xiriir ka moneylenders, ilaa iyo inta ku waajib laftiisa uusan ku siin sabab, moneylenders waa looma oggola inay ururinta inta lagu jiro maalinta sida laga bilaabo shaqadaada.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira Ujeeddada sharcigan si ay u ilaaliyaan arimaha gaarka ah ee ku waajib, musawir iyo calaamooyin, dabcan, oo aad u tagtaan ururinta daynta cod weyn, u dhaqmaan ama Isuwa 'waa xadgudub. Sidaas daraaddeed in xaqiiqda ah in deynta ku wareegsan
ma aha in iftiinka, deyn ayaa sidoo kale u baahan doontaa inaad fiiro.
in la yidhaahdo ahaa sharciga sidaas, bilowgii hay'adaha dawladda Hay'adda Adeegyada Maaliyadeed ayaa aasaasay tilmaamaha ururinta.
Sidaas daraaddeed, falka waxaa hadda tegey, Shirezu laga yaabaa in aad dacweeyay si loo beddelo, moneylenders waa odhan maayo in la isticmaalo ururinta xad-dhaaf ah.
hay'adda dayn ururinta Iyada oo ku xidhan hay'adaha maaliyadeed
, halkii ururinta ah ee-guriga, waxaa sidoo kale waa meel codsi ah in hay'adda dayn ururinta. Sida marka
bixinta ayaa si toos ah xayiran qoraal ama telefoon lagu daro in aad la xiriirto gaaray, iwm, waxa lagu gartaa in ay fuliyaan ururinta in a midab adag wax yar ka badan hay'adaha maaliyadeed sida takhasuska ah ee soo kabashada.
jeclaan lahaa in aan halkan la soco, khiyaamo, waayo. Shirkadda
khiyaamo iska dhigaya dayn ururinta xirfad farshaxanka dhawaan sidoo kale baahsan. Waxa intaa dheer in amaahda
sidoo kale, qaab xiriir, sida in ay beegsadaan kuwa bixisay bishii ah oo go'an iyo mobile content a, iyo khiyaamo ay tirada aan la shaacin oo qof. Sida
"heshiis ma dhamaan wali," "waajib in ay bixiyaan ayaa dhacay", maxaa yeelay, erayadii waa la daabacay ayaa sheegay in qoraal ahaan, oo aan ka yarayn waa kiiska in wax ka siin lahaa waxaa dadka aan ognahay khiyaanayn. Inta ay
ma aha yaqaan, uu ku leeyahay in ay iska indha waa in ay tahay ugu fiican.
haddii bixinta waa raagay, inkastoo ururinta cabsi ma aha hay'ad maaliyadeed, waxaad tidhaahdaan, in kiisas badan oo ku xiran ururinta ka xirfadle ah, sida dayn ururinta xirfad farshaxanka.
marka ay jirto qoraal ama telefoon xiriir ah, iwm waa in si dhakhso ah u dhici, Isku day inaad si loo gaaro xal hore.
marka performing amaahda ah, waxaa muhiim ah in la sameeyo qorshe cad bixinta waqti isku mid ah. Marka
noqon lahaa gaar ahaan bixinta ee muddada-dheer, si ay u noqdaan foom si aad u bixiso badan oo xiiso lacagtaas, Isku day inaad si loo ogaado taariikhda final-bixinta ka hor naftaada. amaah la xiriira / talinayo card
inaad soo amaahato lacag isla maalintaas